Top News:-Madaxweyne Farmaajo Guulihii uu kala soo laabtay Ethiopia | Kobciye24.com
Top News:-Madaxweyne Farmaajo Guulihii uu kala soo laabtay Ethiopia
Madaxweyne Farmaajo oo ay booqashadiisa ku wehliyeen mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdiisa ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay ra’iisalwasaaraha Itoobiya Hailemariam Desaleng. Soo dhaweyntaasi oo ka duwaneed sidii loo soo dhaweyn jiray madaxdii ka horreysay Farmajo ayay dad badan u arkaan inay furtay bog cusub.
Kulanka labada mas’uul ayaa ahaa mid arrimo badan laga wada hadlay. Waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa ahaa iskaashiga dhanka ammaanka ee labada dhinac .
Ra’iisalwasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in waligood aysan gacan dhaafin dowladda Federaalka, waxa uuna intaasi ku daray in markastaa oo ay doonayaan in ay la macaamilaan maamul goboleedyada ay ruqsad ka qaadan jireen dowladda Federaalka.
”Iyadoo aan oggolaansho ka helin dowladda federaalka ee Soomaaliya, Itoobiya iyo waddan kale toona ma ahan inay farageliyaan madaxbannaanida iyo qarannimada Soomaaliya. Waxaan filayaa inay arrintani caddahay. Anigu qof ahaan ma aqbali karo in waddanna uu si toos ah u soo fara geliyo arrimaha dalkeyga isagoo aan oggolaansho iga haysan, Soomaaliyana waa sidaas oo kale,” ayuu yiri ra’iisalw asaraaha Itoobiya.
”Socdaalka Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uu ku tegey dalka Ethiopia wuxuu dhabbe u falay wada shaqeyn iyo iskaashi nooc hor leh oo wanaagsan oo dhex mara Soomaaliya iyo Ethiopia kaas oo ku qotoma is qaddarin iyo wada faa’iideysi siman”, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya Yusuf Garaad